Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na Linux Mint 20 - LinuxCapable
Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na Linux Mint 20
Sunday, November 14, 2021 by Jọshụa James
Bubata TuxInvader PPA
Wụnye Linux Kernel 5.15 na Linux Mint
Mmelite maka kernel 5.15
Linux kernel 5.15 nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, nkwado na nchekwa. Mwepụta kernel Linux 5.15 na-eme ka nkwado maka ya dịkwuo mma AMD CPUs na GPU, Intel si 12th Gen CPUs, ma weta njirimara ọhụrụ dị ka NTFS3, KSMBD (CIFS/SMB3), na n'ihu Apple M1 nkwado, n'etiti ọtụtụ mgbanwe na mgbakwunye ndị ọzọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Linux Kernel 5.15 kacha ọhụrụ na Linux Mint 20.xx.
Ka ịtọlite ​​akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ, gaa na nkuzi anyị na Na-agbakwụnye onye ọrụ na Sudoers na Linux Mint.
Nhọrọ mbụ iji wụnye kernel Linux 5.15 bụ ịwụnye ya ppa: tuxinvader/lts-mainline by TuxInvader. Nke a nwere ụfọdụ 5.15 kachasị ọhụrụ, yana kernel 5.14 gara aga na-ewuli ma na-emelite ya mgbe niile.
Ihe ndọghachi azụ bụ nke a bụ PPA a na-atụkwasịghị obi na ọ bụghị ntọhapụ nke Linux Mint ma ọ bụ ndị otu Ubuntu, mana nyere akụkọ ihe mere eme nke PPA, ọ dị mma dịka PPA ọ bụla a ma ama. I kwesịghị ịdị na-etinye nke a na sistemu nwere mmetụta ma ọ bụ ụdị mmepụta agbanyeghị.
Mbụ, wụnye LTS Mainline Tuxinvader PPA:
Ozugbo arụnyere, melite ndepụta nchekwa gị.
Ọzọ, gaba na ntinye nke Linux Kernel. Gbaa mbọ hụ na n'oge a akwadoro akwụkwọ ọ bụla nwere mmetụta naanị ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-aga nke ọma.
Na-esote, wụnye 5.15 jeneriki Linux kernel ọkwọ ụgbọ ala site na ime iwu na-esonụ.
Ozugbo emechara, ị ga-achọ ịmalitegharị sistemụ gị ka kernel ọhụrụ wee rụọ ọrụ nke ọma.
Ozugbo ịbanye n'ime sistemụ gị, gbanye iwu na-esonụ iji kwado ụdị kernel na-agba ọsọ.
Na mgbakwunye, wụnye ngwugwu Neofetch nke ga-ebipụta nsonaazụ mara mma na njedebe nke nkọwa sistemụ gị.
Na-esote, gbaa iwu mbipụta neofetch.
Ekele, ị tinyela kernel 5.15 kachasị ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ Mint Linux gị.
Iji dobe kernel 5.15 gị ka ọ dị ọhụrụ, ị ga-eji mmelite dabara adaba na iwu nkwalite iji dọpụta mmelite sitere na ebe nchekwa PPA dị ka ngwugwu ọ bụla ọzọ na sistemụ Mint Linux gị.
Ka ịlele maka mmelite na nkwalite.
Cheta, maka mmelite kernel ọ bụla, ị ga-achọkwa ịmalitegharị sistemụ gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye kernel 5.15 kacha ọhụrụ na sistemụ Mint 20 Linux gị.
Ekwesiri iburu n'uche ma ọ bụrụ na sistemụ gị bụ ihe nkesa na-emepụta ihe, a ga-adụ ọdụ ka ị jiri kernel dị ugbu a na-ebugharị na Mint Linux ma ọ bụ jiri ụdị HWE maka nkwụsi ike. Agbanyeghị, nke a bara uru ịnwale maka ndị chọrọ ịnwale kernel 5.15 maka nkwado ngwaike ọhụrụ ya.
Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na Pop!_OS 20.04
Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na AlmaLinux 8
Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na CentOS 8 Stream
Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na Rocky Linux 8
Categories Mint Linux Tags Linux kernel, Mint 20 Mint Linux Mail igodo
Otu esi etinye phpBB na LEMP na AlmaLinux 8
Otu esi etinye Cockpit na Debian 11 Bullseye